Shabeelle oo loo xiray sii deynta codka Al-shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shabeelle oo loo xiray sii deynta codka Al-shabaab
Mareeg.com: Ciidamada amaanka Soomaaliya, ayaa xalay markale xiray Idaacadaha Shabeelle iyo SKY FM, kuwaasoo dhawaan shaqadiida ay dib u fasaxday dowladda Soomaaliya, kadib 7 bilood oo ay xirnaayeen.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale xirtay qaar ka mid ah mas’uuliyiinta Shabeelle, sida Agaasime Maxamed Muuse, iyadoo la raadinayo Milkiilaha Shabeelle, C/maalik Yuusuf Maxamuud, sida uu xaqiijiyey afhayeen wasaaradda Amniga Maxamed Yuusuf Cusmaan.
Afhayeenka wasaaradda Aminiga ayaa sheegay in sababta loo xiray labada Raadiye ee la isla leeyahaya ay tahay, iyadoo laga sii daayey codka Afhayeenka Alshabaab, Cali Maxamuud Raage, kaasoo sheeganayey iney laayeen ardaydii Jaamacadda Gaarisa ee gobolka Woqooyi Bari Kenya.
“Idaacadaha Muqdisho ku yaalla dhamaantood wey ka gaabsadeen iney sii daayaan codka Cali Dheere, hase ahaatee Shabeelle wey ka madax adeygtay, laamaha amaanka ayaa xiray, maxkamad ayaana mar kale la geynayaa” ayuu Maxamed Yuusuf Cusmaan.
Idaacadaha Shabelle iyo Sky FM ayaa dib u hawl galay 14 March 2015 kadib markii ay dawladda u xirnayd muddo 7 bilood ah, laguna ganaaxay Suxufiyiintii xilligaa xirnaa lacag dhowr kun oo dollar ah.
Dowladda Somalia oo 5 qodob ku wajaheysa Shabaab
Uganda: Shabaab oo beegsanaya goobo waxbarasho